Mividy an-tserasera | Fikambanana fampiroboroboana ny kolontsaina Ota Ward
Rehefa tonga amin'ilay tetikasa tohanan'ny fikambanana ianao dia zahao azafady "Momba ny ezaky ny fikambanana hisorohana ny fihanaky ny aretina amin'ny fotoana fampisehoana" sy ny "Fangatahana ho an'ireo rehetra tonga amin'ny fampisehoana" alohan'ny hahatongavanao ao amin'ilay toerana.
Momba ny ezaky ny fikambanana hisorohana ny fihanaky ny aretina amin'ny fotoana fampisehoana
Mangataha amin'ny olona rehetra tonga amin'ilay fampisehoana
Famandrihana avy amin'ny internet
Misy 24 ora isan'andro. (Tsy ankanavaka ny fotoana fikolokoloana manomboka amin'ny 3:4 maraina ka hatramin'ny XNUMX:XNUMX maraina)
Ny fisoratana anarana ho mpikambana dia takiana mialoha hampiasaina.
Ho an'ny seza voatokana dia azonao atao ny misafidy ny laharan'ny seza tianao indrindra.
Azafady, miroso amin'ireto manaraka ireto mankany amin'ny pejy fivarotana an-tserasera.
Fikambanana fampiasana fampiroboroboana ara-kolontsaina ao amin'ny Ota Ward (fanavaozana 2021)
Kara-trosa (VISA / Master / JCB / AMERICAN EXRESS / Diners Club)
Vola (rehefa mahazo tapakila ao amin'ny FamilyMart fotsiny)
Ahoana ny fomba handraisana ny tapakila
· Ny famandrihana dia azo atao hatramin'ny 19:00 isan'andro alohan'ny fampisehoana.
· Tsy misy fisoratana anarana hampiasa ny serivisy Tapakila MOALA.
· Azonao atao ny manamarina ny mombamomba ny fividianana ao amin'ny My Page ao amin'ny tapakilan'ny fampiroboroboana ny kolontsaina Ota Ward amin'ny Internet.
· Ny URL ny mombamomba ny tapakila dia halefa any amin'ny adiresy mailaka (smartphone) voasoratra herinandro alohan'ny fampisehoana.
· Ny sarany mitentina 150 yen dia ampandoavina isaky ny tapakila.
* Ny finday sy ny takelaka hafa ankoatry ny finday avo lenta dia tsy azo ampiasaina.
· Azafady mba ampandehano ny "Fami Port" napetraka ao amin'ny magazay ary raiso ao amin'ny kaonty vola io.
· No. 1 (kaody orinasa "30020") Ary ny laharana faharoa (isa fifanakalozana (isa 2 manomboka amin'ny 8)) no takiana.
Tsindrio eto raha hampiasa ny tapakila FamilyMart
· Ny famandrihana dia azo atao hatramin'ny 2 herinandro alohan'ny datin'ny fampisehoana.
· Haterinay amin'ny alàlan'ny fitaterana Yamato izany.
· Raha tsy eo ianao dia misy serivisy fanaterana misy daty sy ora voatondro.
· Ankoatry ny sarany tapakila, 450 XNUMX yen ny saram-pandefasana isaky ny tapakila.
Tsy azo atakalo, ovaina na averina ny tapakila.
Ny tapakila dia tsy havoaka amin'ny toe-javatra hafa (very, may, simba, sns.).
Amin'ny ankapobeny, ny fomba fandraisana fanapahan-kevitra tamin'ny fotoana nividianany dia tsy azo ovaina.
An-trano ihany ny fandefasana.Tsy alefa any ampitan-dranomasina izahay.
Raha tsy mandray mailaka mandeha ho azy avy amin'ny serivisy momba ny tapakila an-tserasera Ny fandefasana avy amin'ny mpizara foibe angon-drakitra mahazatra dia azo heverina ho toy ny mailaka maloto.Azafady zahao ity manaraka ity ho an'ny fomba fanohanana mahazatra.
Fomba fampiasana tapakila an-tserasera
Azafady mba jereo ity video manaraka ity momba ny fomba fisoratana anarana sy fividianana tapakila an-tserasera.
Ahoana ny fisoratana anarana amin'ny maha mpikambana tapakila amin'ny Internet anao
Ahoana no hividianana tapakila an-tserasera
Fampandrenesana momba ny fandrarana ny famerenana ny tapakila
Momba ny fandrarana ny famerenana ny tapakila